२०७३ माघ ११ गते ०३:२०
ट्युसन र कोचिङमा विद्यार्थीको आकर्षण
कञ्चनपुर । महेन्द्रनगरको मर्निङ ग्लोरी उच्चमाविमा अध्ययनरत अमृता कलौनी सोमबार स्कुल छुट्टी हुनेबित्तिकै नजिकैको ट्युसन सेन्टर पुगिन्। विद्यालयमा राम्रै पढाइ भए पनि अन्य साथी ट्युसन गएकाले उनलाई पनि जान मन लाग्यो। साथीहरू सबैजसो ट्युसन पढेकाले आफू पनि आएको उनले बताइन्। ‘स्कुलमा पढाइ त राम्रै छ, ...
२०७३ माघ १० गते २१:५४
ठूली दिदीहरुले जोडिदिएको बहिनीहरुको शिक्षा
सुर्खेत । १४ वर्षकी पूर्णिमा विकलाई कक्षा ७ मा पढ्दै गर्दा अभिभावकले उनको विवाह गरिदिए । विवाह गरेपछि उनी विद्यालय जान छोडिन् । घरकै कुचोमा सिमित भइन् । यस्तो बेला उनी जस्तै छोरीहरुका लागि एउटा अभियानमुखी कार्यक्रम सञ्जीवनी नै बन्यो । त्यो हो, बहिनी शिक्षाका लागि दिदी कार्यक्रम । यसमा आबद्ध दि ...
२०७३ माघ ९ गते २३:३४
नमूना माध्यमिक विद्यालय बनाउन छनोट प्रक्रिया शुरू
काठमाडौं । शिक्षा विभागले नेपालमा रहेको २ सय ४० ओटा निर्वाचन क्षेत्रमा नमूना माध्यमिक विद्यालय बनाउन छनोट प्रक्रिया शुरू गरेको छ । नेपालमा नमूना विद्यालयको विकास र सञ्चालनको आवश्यकता भएकाले विभागले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत नमूना माध्यमिक विद्यालय बनाउन छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।सन ...
२०७३ माघ ९ गते २३:२४
प्राविधिक शिक्षामा चरम लापरबाही
कञ्चनपुर । डेढ वर्षअघि प्राविधिक शिक्षाअन्तर्गत वेल्डिङ इलेक्ट्रिसियन पढ्न थालेका भीमदत्त नगरपालिका २ महोलियाका पुष्पराज भट्ट अहिले अन्योलमा छन् । उनी अहिलेसम्म परीक्षा हुने मिति तथा परीक्षा फारमको समेत कुनै टुंगो नलागेपछि चिन्तित भएका हुन् । ५० हजार शुल्क तिरे पनि भनेअनुसार पढाइ नहुँदा ...
२०७३ माघ ८ गते २१:१२
घट्दै बालिकाहरू : भ्रूणको लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गराउने प्रवृत्ति बढ्दो
काठमाडौं । भ्रूणको लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गराउने प्रवृत्ति बढेपछि मुलुकमा पछिल्लो समय बालिकाको जन्मदर घट्दै गएको पाइएको छ । मुलुकी ऐनले गर्भपतन गराउने उद्देश्यले लिंग पहिचान गरेको पाइए ६ महिनादेखि २ वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । कारबाहीको व्यवस्था भए पनि लिंग पहिचान गरी भ्रूण हत्या गर्ने क् ...
२०७३ माघ ८ गते २०:२२
अछाममा ४१.८५ प्रतिशत महिला निरक्षर
अछाम । पूर्ण साक्षर जिल्ला बनाउने तयारीमा जुटेको यहाँको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गरेको सर्वेक्षणमा २९ प्रतिशत नागरिक निरक्षर रहेको पाइएको छ । जसमध्ये महिला ४१.८५ प्रतिशत अर्थात ३२ हजार ५ सय २२ निरक्षर छन् । यो १५ देखि ६० वर्षसम्मका महिलाको तथ्यांक हो । प्रत्येक घरमा पुगी गरिएको सर्वेक्षणमा उक्त ...
२०७३ माघ ८ गते २०:०१
आऊ प्रिय! नगर बेर भनी मलाईराखेर काखबीच हात दुवै समाईती लाल ओठ मुखनेर पुर्‍याउनुभोलौ भन्न सक्तिनँ म ता पछि कुन्नि के भो ? पछि जरुर केही भो! यो त्यही कविताको अंश हो, जुन कविताका कारणबाट आजभन्दा सय वर्षअघि नेपाली साहित्यको इतिहासमा एउटा ठूलो हाहाकार मच्चियो। त्यसबेला प्रथम विश्वयुद्धमा जान लाग ...
२०७३ माघ ८ गते १९:५७
सडकमा नि:शुल्क ट्युसन
इटहरी । आफूले एसएलसीभन्दा बढी पढ्न पाएनन् । पढ्ने चाहना नभएर होइन, आर्थिक अवस्थाले दिएन । पैसा नभएर पढ्न नपाउँदाको पीडा कस्तो हुन्छ चन्द्र भण्डारीलाई राम्रोसँग थाहा छ । आफूले जस्तै पीडा अरूले भोग्नु नपरोस् भन्ने सोचले उनलाई घचघच्यायो । निम्न आय भएका परिवारका केटाकेटीलाई उनले खुला स्थानमै ट्युसन पढाउ ...
२०७३ माघ ६ गते २३:०६
शिक्षण छाडेर जुत्ता बनाउँदै
नवलपरासी । पहिले रजहरकी उषा तामाङलाई घरधन्दा सकेपछि विद्यालय जाने हतार हुन्थ्यो । अहिले उनको दैनिकी फेरिएको छ । बिहान घरायसी काम सकेपछि उनलाई जुत्ता बनाउन भ्याइनभ्याइ हुन्छ । घरनजिकको विद्यालयमा पढाउने उनलाई स्वरोजगार बन्न मन लाग्यो । त्यही उद्देश्यले ढाका र मखमलको जुत्ता बनाउने तालिम लिएर अहिले आफै ...
२०७३ माघ ६ गते २२:५०
जारी भयो समावेशी शिक्षा नीति
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले ‘अपांगता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी शिक्षा नीति, २०७३’ पारित गरेको छ । विशेष शिक्षा नीति, २०५३ खारेज गरी नयाँ नीति जारी गरिएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले बताएका छन् । विशेष शिक्षा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०६० चाहिँ यथावत् छ ।‘नेपालल ...
२०७३ माघ ६ गते २२:४८
खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक
काठमाडौं । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका अनेक प्रयत्न सफल नभएपछि शिक्षा मन्त्रालय प्रधानाध्यापकलाई जवाफदेही बनाउने निष्कर्षमा पुगेको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनोट हुने र सम्झौताअनुरूप नतिजा दिन नसके हटाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । त्यसका लागि प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी रहनेछ ।‘न ...
२०७३ माघ ६ गते २२:३०
एक शिक्षक, ८३ विद्यार्थी
काठमाडौं । नुवाकोटको रानीपौवास्थित भवानी माविमा प्रारम्भिक बालविकासदेखि १२ कक्षा सम्म ८ सय ८३ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। विद्यालयमा १४ जना शिक्षक दरबन्दी छ। आधारभूत तहमा १० र मावि तहमा ४ शिक्षक छन्। मावि तहमा अनिवार्य र ऐच्छिक गरी ८ विषय पढाइ हुन्छ। चार शिक्षकले मावि तहका तीन सय ३७ विद्यार्थीलाई प ...
२०७३ माघ ६ गते २२:२५
दाङ । दाङ रामपुरस्थित गंगा उच्च माविले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रियालाई लक्षित गर्दै १ पुसमा सात सय ५९ अभिभावकको नामावली प्रकाशन गर्‍यो। उक्त संख्याप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पुस ११ गते विद्यालयमा एउटा पत्र पुग्यो। प्रकाशित अभिभावक सूची अधुरो रहेको भन्दै लेखिएको उक्त पत्र एमाले रामपुर गा ...
२०७३ माघ ६ गते २२:२०
दाङ । घोराही– ३ स्थित रात्रि प्रावि 'क्वाडी'ले शैक्षिक गुणस्तर बढाउन भन्दै ०६७ देखि निजी विद्यालयकै ढाँचामा पठनपाठन सुरु गर्‍यो। निजी विद्यालयजस्तै नर्सरी, युकेजी, केजी हुँदै कक्षा वर्गीकरण गरेको यो विद्यालयले अंग्रेजी माध्यमबाटै पठनपाठन सञ्चालन गर्‍यो। अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन ...
२०७३ माघ ६ गते २२:११
विद्यार्थी र शिक्षकको छुट्टाछुट्टै आन्दोलन
रोल्पा । जलजला बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थी र शिक्षकले छुट्टाछुट्टै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । क्याम्पसमा विभिन्न समस्याले पठनपाठन प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सातादेखि शिक्षक विद्यार्थी आन्दोलित भएका हुन् । विद्यार्थीले निर्माणाधीन क्याम्पस भवन अलपत्र भएको भन्दै अघिल्लो साता आन्दोलन सुरु गरेका थिए । ...
२०७३ माघ ५ गते २३:०२
काठमाडौं । भूकम्पमा भत्किएका विद्यालय पुनर्निर्माणमा शिक्षा मन्त्रालय र आयोजना कार्यान्वयन इकाइबीच समन्वय नहुँदा समस्या भएको छ । भवन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा भूकम्पपीडित बालबालिकाको पढाइ पनि प्रभावित भएको छ ।विद्यालय भवन तीन वर्षभित्र बनाइसक्ने योजना छ । तर, अहिलेसम्म कति भवन बने भन्ने विवरण शिक्षा मन ...
२०७३ माघ ५ गते २२:५१
उदाहरणीय बन्दै सामुदायिक
डोटी । पुरानो विद्यालय भवनको पश्चिमतर्फबाट महेश ओझाले बिहान ९ बजे सिटी फुके । खेलमैदानमा भलिबल, चुंगी, टिफ्फा खेलिरहेका छात्रावासका विद्यार्थी त्यसपछि कुदेर भान्साघरअघि भेला भए ।दाल, भात र तरकारीका ठूला भाँडा गणित, विज्ञान र अंग्रेजीका शिक्षकले सम्हालेर बसेका छन् । हातमा थाल र कचौरा बोकेका विद्यार् ...
२०७३ माघ ५ गते २१:५२
उपकुलपति अझै छानिएन
काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालय (९केयू) उपकुलपतिविहीन भएको बुधबार ३८ दिन भयो । उपकुलपति सिफारिस समितिले विश्वविद्यालय ऐनविपरीत पाँच जनाको नाम सिफारिस गरेको पनि दुई साता भइसक्यो । यति लामो समयसम्म केयू कहिल्यै उपकुलपतिविहीन भएको थिएन । रामकण्ठ माकाजुको चारवर्षे कार्यकाल मंसिर २६ मा सकिनुअघि नै नया ...
२०७३ माघ ५ गते २१:४६
सामुदायिक स्कुल अब्बल
बारा । बाराको निजगढ ८ स्थित गौरीशंकर उच्च माविमा तीन वर्षअघि १ हजार ५ सय विद्यार्थी थिए । अहिले २ हजार पुगेका छन् । चापका कारण विद्यालयले यस वर्ष दुई दिन मात्र भर्ना खुलायो । दुई दिनमा कुल विद्यार्थीको ३० प्रतिशत वीरगन्ज, धनुषा, रौतहट, सर्लाही र जिल्लाकै दक्षिणी भेगबाट भर्ना हुन आए । बाँकी निजगढ आस ...
२०७३ माघ ४ गते २३:१०
सरकारले तोक्यो बालबालिकाको खेलौनामा हुनुपर्ने धातु तथा रसायनको मापदण्ड
काठमाडौं । सरकारले बालबालिकाले प्रयोग गर्ने खेलौनामा हुने गह्रौं धातु लिड लगायतका अन्य रसायनिक पदार्थको मापदण्ड तोकेको छ । मापदण्ड अनुसार नभएका खेलौनाहरु मुलुक भित्र आयात, भण्डारण, विक्री वितरण, उत्पादन मात्र नभई प्रयोगमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ । सरकारले लगाएको उक्त प्रतिबन्ध १८१ दिन पछि लागु हुने ...
२०७३ माघ ४ गते २२:५८
किताब छाप्नै बाँकी
काठमाडौं । सत्तरी जिल्लामा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन ८७ दिन (चैत अन्तिमसम्म) बाँकी छ । आउँदो शैक्षिक सत्रमा पढ्ने कक्षा १ देखि १० सम्मका ५७ लाख ५७ हजार ७ सय ४४ जना विद्यार्थीका लागि ३ करोड ७२ लाख ५१ हजार ९ सय ५५ थान पाठ्यपुस्तक चाहिन्छ । यीमध्ये १ करोड २१ लाख थान पाठ्यपुस्तक अझै छाप्न बाँकी छ । मन ...
२०७३ माघ ४ गते ०८:०१
भवनको रकमसहित अध्यक्ष फरार
वैतडी । विद्यालयको छात्रावास भवन बनाउने रकम लिएर निर्माण समिति अध्यक्ष सम्पर्कविहीन हुँदा कामदारले ज्याला पाएका छैनन् । जिल्लाको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा पर्ने महादेवस्थानस्थित महेश्वरी मावि न्वाघरको छात्रावास निर्माण रकम झिकेर अध्यक्ष अम्मर भण्डारी साउनयता सम्पर्कविहीन बनेका हुन् । शान्ति तथा विकास का ...
२०७३ माघ ४ गते ०७:१५
सांसदहरु भन्छन्, ‘डा. केसीसँगको सम्झौता किन कार्यान्वयन भएन ?’
काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झैता कार्यान्वयन नभएको भन्दै सांसदहरुले सरकारको आलोचन गरेका छन् । सरकार र केसी बीच सम्झौता हुँदा विरोध गर्ने सांसदहरु अहिले कार्यान्वयन गर्न दबाब दिइरहेका छन् । संसदको महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिको मंगलबारको बैठकमा एमाले सांसद श्रीमाया थ ...
२०७३ माघ ३ गते १०:२८
नुवाकोट । माथिको जस्ताबाट शीत चुहिरहेको छ । तलको सिमेन्टको चिसोले शरीर थर्रर कमाउँछ । यो अवस्था हो नुवाकोटको ककनी गाविसस्थित भवानी माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीको । गत वर्षको भूकम्पपछि उनीहरू जाडोमा सास्ती खेपी बाँस र जस्ताको टहरामा पढ्दै आएका छन् । चिसो सहन नसकेपछि विद्यार्थीले बाहिर घाममा प ...
२०७३ माघ ३ गते ००:११
गाउँमा प्रविधियुक्त आधुनिक पुस्तकालय
सिन्धुपाल्चोक । जिल्लाका दुई गाविसमा पहिलोपटक प्रविधियुक्त आधुनिक पुस्तकालय स्थापना भएको छ । भोटसिपा र ठोकर्पा गाविसमा रिड सूचना तथा स्रोत केन्द्र (रिड नेपाल), ब्युटिफुल स्टोर फाउन्डेसन र साम्सुङ इन्जिनियरिङ साउथ कोरियाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा आधुनिक पुस्तकालय स्थापना गरिएको हो । औपचारिक शिक् ...
२०७३ माघ ३ गते ००:०५
परीक्षा बोर्ड अध्यक्षमा १३ र सिटिइभिटीमा सात दाबेदार
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षका लागि १३ र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद् (सिटिइभिटी) सदस्यसचिवका लागि सात जनाले दाबी गरेका छन् । उनीहरूले सिटिइभिटीमा कार्ययोजना पेस गरेका छन् । बोर्डको अध्यक्षका लागि कार्ययोजना पेस गर्नेमा निजामती सेवाका पूर्वसचिवहरूदेखि प्राध्यापकहरूस ...
२०७३ माघ ३ गते ००:०१
विद्यालयमै डोमलाई छोइछिटो
जनकपुरधाम । जनकपुर उपमहानगरपालिका १ को ऐलानी जग्गामा रहेको झोपडीमा बस्ने अनिता मल्लिक डोमले आफ्ना चार छोराछोरीलाई पढाउन सक्दो प्रयत्न गरिन् ।सामान्य लेखपढ गर्न आउने दुई छोरी र दुई छोरालाई अनिताले जनकपुरकै सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा अन्य सरकारी विद्यालयमा पढ्न पठाइन् । तर छोराछोरीलाई कहिले शि ...
२०७३ माघ २ गते ०४:२३
खण्डहर बन्दै छात्रावास
सिरहा । सिरहाको सूर्यनारायण–सत्यनारायण मोरवैता यादव बहुमुखी क्याम्पसको करोडौँ मूल्य पर्ने छात्रावास खण्डहर बन्दै गएको छ । आठ वर्षअघि विद्यार्थीबीच भएको विवादपछि छात्रावास अहिलेसम्म प्रयोगविहीन रहेको छ । क्याम्पसका अन्य विषयमा प्रमुख र विद्यार्थी संगठनले चासो दिने गरे पनि छात्रावास पुनः सुचारु ...
२०७३ माघ २ गते ०४:१८
रुकुम । पीपल ४ का १५ वर्षीय जयबहादुर विक र ८ की १४ वर्षीया गीता बुढालाई बालविवाह अवैध भन्ने थाहा नभएको होइन । तर, पनि उनीहरूले भागेर बिहे गरे । उमेर नपुगी बिहे गरेको भन्दै अभिभावकले उनीहरूलाई निकै सम्झाए । प्रहरीलाई पनि सम्झाइबुझाइ गरिदिन लगाए । तर, उनीहरू कसै गरी छुट्टिन मानेनन् । अहिले यो बालदम्प ...
२०७३ माघ १ गते ०१:१२
काठमाडौं । आर्थिक अभावका कारण लक्ष्यअनुसार पाठ्यपुस्तक छाप्न नसकेपछि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छपाइका लागि दाता गुहार्ने भएको छ । लामो समयदेखि आर्थिक अभाव झेलिरहेको केन्द्र आर्थिक स्रोतको विकल्पका रुपमा दाताको भर पर्न बाध्य भएको हो । लामो समयदेखि राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्रको रुपमा ...
२०७३ माघ १ गते ०१:००
सूचना प्रविधिमा सरकारी छलाङ : दूर शिक्षादेखि भर्चुअल क्लाससम्म
काठमाडौं । कुनै समय श्रव्य शिक्षा कार्यक्रमका लागि सरकारले रेडियो नेपालबाट दूर शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको थियो । सूचना प्रविधि र आमसञ्चार माध्यमको अन्य विकल्प नभएको तत्कालीन समयमा निकै सहयोगी मानिएको दूर शिक्षा कार्यक्रम निकै उपयोगी पनि थियो । यद्यपि, रेडियो कार्यक्रम अझै पनि सञ्चालनमा छ ...
२०७३ माघ १ गते ००:४६
काठमाडौँ । काठमाडौँ जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अब कक्षा ८ को परीक्षा आफैँले सञ्चालन गर्ने भएको छ ।यसअघि प्रश्नपत्र जिशिकाले उपलब्ध गराउँथ्यो भने विद्यालयले परीक्षा लिई नतिजा पनि प्रकाशित गथ्र्यो र विद्यार्थीको लब्धाङ्कपत्रमा जिशिकाले औपचारिकताका लागि छाप लगाई जारी गरिन्थ्यो । कक्षा ८ को ज ...
२०७३ माघ १ गते ००:३९
नेपालमा प्रत्येक वर्ष एक लाखभन्दा बढीको हुन्छ बालविवाह
नेपालगन्ज । नेपालमा प्रत्येक वर्ष १० वर्षमुनिका सरदर एक लाख ३८ हजार बालबालिकाको विवाह हुने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ।राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनुसार नेपालमा कुल बालविवाह सङ्ख्यामा पनि प्रतिवर्ष सरदर एक लाख १५ हजार बालिकाको विवाह हुने गरेको छ।राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका क्षेत्रीय निर्देश ...
२०७३ पुस २९ गते ०९:०३
अखिल क्रान्तिकारीले तोक्यो स्ववियु निर्वाचनको कमाण्डर
काठमाडौं । अखिल क्रान्तिकारीले आसन्न स्ववियु निर्वाचनको तयारीस्वरुप जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको छ । संगठनको दुई दिनसम्म बसेको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले स्ववियु निर्वाचनमा होमिने निर्णय गर्दै बिभिन्न कलेजका लागि ९५ नेताहरुको जिम्मेवारी तोकेको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २८ वर्षे उमेरहद सहित म ...
२०७३ पुस २८ गते २३:१३
सरकारी छात्रवृत्ति दूतावासबाटै
काठमाडौं । बंगलादेश सरकारले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको एमबीबीएस अध्ययनको छात्रवृत्ति कोटामा बंगलादेशी दूतावास आफैंले छनोट गरेर पठाउने तयारी गरेको छ । बंगलादेश सरकार र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताबमोजिम दूतावासले बाँड्ने छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको छनोट शिक्षा मन्त्रालयले गर्नुपथ्र्यो । ...
२०७३ पुस २८ गते १०:५८
पढाइ छाडेर विद्यालयमा मजदुरी
बाँके । बैजापुरकी लक्ष्मी र स्वस्तिका थारू किताबकापी बोकेर गाउँकै भुवरभवानी माविमा पढ्न जान्थे । साथीभाइसँग पढ्न जाँदा उनीहरूको खुसी बेग्लै हुन्थ्यो । पढेर शिक्षक बन्ने सपना बुन्थे उनीहरू । तर, ती सपना पूरा हुन सकेन । बीचमै भत्कियो । अहिले पनि उनीहरू दैनिक विद्यालय जान्छन्, अरू साथीसँगै कक्षामा बसे ...
२०७३ पुस २८ गते ०९:१८
छात्राहरू पढ्दापढ्दै बेहोस
जाजरकोट । लगातार एक सातादेखि विद्यालयका छात्रा बेहोस हुने, कराउने, थरथर काँप्नेलगायतका अनौठा लक्षण देखाउन थालेपछि जाजरकोट पजारुस्थित दुईवटा विद्यालयमा झाँक्री बोलाएर झारफुक गर्न थालिएको छ । जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने पजारु ३ मा स्थित कालिका माध्यामिक र सोही गाविसको वडा नं ५ मा रहेको वागेश्वरी म ...
२०७३ पुस २८ गते ०९:०६
व्यवस्थापन समिति गठनमा बढ्यो सर्वसहमति
शम्भु यादव/लहान तराईका जिल्लाहरुमा विवादले हुनै नसकेका र भइहाले पनि बाहुबलका भरमा हुने गरेका विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन सर्वसहमतिले हुन थालेको छ । पछिल्लो उदाहरण सिरहा जिल्लालाई लिन सकिन्छ । नयाँ शिक्षा ऐनअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन थालेपछि सर्वसहमतिले समिति बनाउने क्रम सिरहामा बढ ...
२०७३ पुस २७ गते २२:४२
गोकर्णप्रसाद भण्डारीचरिकोट । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर सत्य हो। दोलखाको एक विद्यालयमा ८ कक्षा पढ्नुपर्ने विद्यार्थी २ कक्षामा अध्ययन गरिरहेको पाइएको छ।दोलखा लाकुरीडाँडा गाविस–४ ठेगाना भएकी २४ वर्षीया लक्ष्मी श्रेष्ठ हाल कक्षा २ मा अध्ययन गरिरहेकी छन्। दोलखाको एक मात्र बहिरा पढ्ने विद्यालय भ ...